Ka ụdị COVID-19 na-arịwanye elu, nkpuchi ihu na ụgbọ elu na-agbanwe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ka ụdị COVID-19 na-arịwanye elu, nkpuchi ihu na ụgbọ elu na-agbanwe
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ahụike • News • Safety • Tourism • Transportation • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ihe nkpuchi ihu na ụgbọ elu
Chee na ị dịla njikere ịbanye n'ụgbọ elu gị n'ihi na ị kpuchiri ihu gị? Jide, ị nwere ike nọrọ na ihe ijuanya. Ịfe nkpuchi ihu na ụgbọ elu dị ogologo adịghị mma. Ụfọdụ ndị njem na -etinyekarị awa n'ụlọ mposi naanị iji zere iyi nkpuchi. Amachibidoro iyi mkpuchi ihu na Delta Variant na-ebute ndekọ COVID-19 ọhụrụ, anaghị atụ anya ya.
Ị maara na ụgbọ elu ọ bụla nwere ikike ikpebi ọ bụghị naanị ma ọ bụrụ na a ga -eyi nkpuchi ihu kamakwa ụdị mkpuchi ihu ga -eyi mgbe ọ nọ n'ụgbọ elu?
Know mara ọdịiche dị n'etiti N95 na nkpuchi akwa na-ekwu na-ekwu na FFP2 na-enweghị valvụ?
Ọtụtụ ndị mmadụ na -eyi mkpuchi ihu, yabụ kedu ihe ị ga -eyi ma ọ bụrụ na amachibidoro ihe mkpuchi eji akwa eme?
Ọtụtụ ụgbọ elu na-amalite machibido mkpuchi ihu nke ejiri akwa mee, na-ekwupụta na ha abụghị ihe mgbochi dị mma megide mgbasa nke COVID-19, ọkachasị n'ihi oke ikpe ọhụrụ kwa ụbọchị gburugburu ụwa n'ihi Delta. ndịiche. Kama nke ahụ, ha na-achọ mkpuchi ịwa ahụ, ihe mkpuchi N95, ihe mkpuchi FFP2 na-enweghị valvụ, ma ọ bụ ihe mkpuchi iku ume FFP3.
Ka ọ dị ugbu a, Lufthansa, Air France, LATAM, na Finnair amachibidoro ihe mkpuchi ihu yana ihe mkpuchi nwere valvụ na -agwụ ike. Chee echiche. Ihe nkpuchi nwere iyuzucha dị ka ụgbọ ala nke nwere ume. Ọ dị mma maka ọkwọ ụgbọ ala (ma ọ bụ na nke a onye nwe ya), mana kedu maka onye ọ bụla nọ n'èzí na -agwụcha? Ihe nkpuchi abụghị ihe nkpuchi abụghị ihe nkpuchi.
N’izu a, Finnair ghọrọ onye na-ebu ụgbọ mmiri ọhụrụ machibidoro ihe mkpuchi ihu n’elu ụgbọ mmiri, na-anabata naanị ihe mkpuchi ịwa ahụ, ihe mkpuchi FFP2 na-enweghị valvụ ma ọ bụ ihe mkpuchi iku ume FFP3, na nkpuchi N95, ụlọ ọrụ ahụ tweeted.
Ụgbọ elu chọrọ mkpuchi ahụike - opekata mpe akwa 3 - bụ Air France na Lufthansa. LATAM ga -enyekwa ohere mkpuchi KN95 na N95. Dị ka akpachapụ anya, maka ndị njem na -ejikọ na Lima, ha ga -amụba okpukpu abụọ ma gbakwunye na nkpuchi ọzọ. Ihe kpatara nke a bụ maka ugbu a Peru nwere ọnụ ọgụgụ ọnwụ COVID-19 kachasị elu n'ụwa.
Na United States, ọtụtụ ụgbọ elu na -enye ohere ikpuchi ihu mana ha machibidoro ụfọdụ ụdị mkpuchi ihu dị ka bandeeji, ịchafụ, ihe mkpuchi ski, gaiters, balaclavas, masks nwere oghere ma ọ bụ ụdị ọ bụla, ihe mkpuchi nwere valvụ na -agwụ ike, ma ọ bụ ọbụna ihe mkpuchi. ma ọ bụrụ na ejiri naanị otu ihe mee ha. Ụfọdụ ndị mmadụ na -eyi ọta ọta plastik, mana n'ihe gbasara United Airlines, ha na -ekwu na nke ahụ ezughi oke ma na -achọkwa nkpuchi ihu n'elu mkpuchi ihu. N'elu ụgbọ elu ndị America, ha anaghị ekwe ka ihe mkpuchi jikọtara tubing ma ọ bụ ihe nzacha batrị na-arụ ọrụ.
Nchịkwa nchekwa ụgbọ njem US (TSA) ewepụtala iwu mkpuchi ihu mgbe a na -eme njem n'ụgbọ njem ọha, gụnyere ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu, na Jenụwarị 2021. Iwu a ga -agwụ na Septemba 13, 2021, agbanyeghị, na ịwa ahụ ọhụrụ. na ikpe COVID-19 n'ihi Delta Variants, the agbatịkwuru ikike ka ọ na -aga ruo Jenụwarị 18, 2022.
Daniel Cannon ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 20, 2021 na 08:06
Data dị n'ime. Nkpuchi anaghị arụ ọrụ! Kwụsị Egwu.
Na -eme oke osimiri mmetọ, na -ebute ọrịa nje mgbe ị na -eji ma na -echebe ndị omekome!